Global Voices teny Malagasy » Ahoana No Nandraketan’ny Raiko Ny 100 Andron’ny Tsy Fahafahana Mivezivezy [Amin’ny Alina] Tao Kashmir · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2016 5:29 GMT 1	 · Mpanoratra Ieshan Wani Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, India, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Saripika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Tsy azo hivezivezena [amin'ny alina] ao Kashmir. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Tamin'ny 8 Oktobra, niantsona tao amin'ny seranam-piaramanidina Srinagar aho. Tsy nisy zavatra niova hatrizay nialako tao telo volana lasa izay. Mbola anaty korontana i Kashmir. Azo tsapain-tanana ny hatezeran'ny mponina. Mahazo anao ny fihenjanana misy raha vao mandao ny faritra voaaro mafy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ianao. Milaza tantarana tranokely vy mahafinaritra andehanan'ny olona miaraka amin'ny tongotra mifatotra vy ny andiana tariby concertina.
Tongasoa ato ny an-tanindrazako: izay anontanian'ny olona misarontava avy any amin'ny fiaramanidina in-an'hetsiny ny momba ahy. Ao amin'ny fefy tariby ambenan'ny tafim-piadiana Indiana no tonga ny fanontaniana matetika.
Hatramin'ny namoizan'i Burhan Muzaffar Wani ny ainy nandritra ny ady tifitifitra fohy tao Kashmir Atsimo, niditra tao an-tendrombohitra sy ny farihy ao amin'ity faritra Himalayana ity ny fanoherana ankehitriny. Iresaho ny olona ary manome valinteny mazava izy ireo: “Tamin'ity indray mitoraka ity, tsy mitovy tamin ‘ny fitroarana 2008 sy 2010 ny toe-pon'ny olona raha ampitahaina.”
Sary avy amin'ny mpanoratra.
Nisotro ronono rehefa avy niasa tamin'ny asam-panjakana telo taona lasa ny raiko. Nandritra ny taona niasàny, tsy mbola nahita azy naka andro tsy iasàna na mijanona ao an-trano noho ny antony manokana aho. Reraka izy tao anatin'izay andro vitsivitsy izay, reraka izy nanomboka tamin'ny nahafatesan'i Wani sy ny Kashmir nirohotra tamin'ny fihetsiketsehana manohitra an'i India.
Sarin'ny gazety mpivoaka isan'andro ao an-toerana taorian'ny nahafaty ilay tanora komandà mpikomy tao anatin'ny tifitifitra tao Kashmir Atsimo. Sary avy amin'ny rain'ny mpanoratra.
Zara raha mipetraka amin'ny toerana iray sy maka aina ny raiko. Mifindrafindra efitra izy: indraindray aza tsy azo atao ny mandeha kely monja ao am-bavahadin'ny tranonay noho ny rivotra feno setroka. Ny hany fotoana nipetrahany milamina dia ny maraina, raha mamaky gazety mpivoaka isan'andro ao an-toerana amin'ny teny Anglisy sy Urdu izy.
Taorian'ny fisotron-drononon'ny raiko, nampiasa azy ny rainy marary. Nandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny fikarakarana azy izy. Namoy ny ainy ny raibeko tamin'ity taona ity rehefa narary ela dia ela.
Mpifanolo-bodirindrina mandingana vatan-kazo napetraka tao akaikin'ny lalana raha mipetraka sy miresadresaka kosa ny hafa. Sary avy amin'ny rain'ny mpanoratra.
Tao anatin'izay 100 andro izany, nikatona hatrany ny farihy. Marobe ireo naratra, 100 farafahakeliny ireo simba tanteraka ny fahitany (maso) noho ny fampiasàn'ny tafika basy. Nanao famoretana goavana ihany koa ny fanjakana. An-jatony ny olona voasambotra isan'andro sy nogadraina teo ambanin'ny «lalàna tsy tan-dalàna»..
Vato nampiasaina mba hanakanana lalana ao ivelan'ny tranoko ao amin'ny Tanàna Fahiny. Sary avy amin'ny rain'ny mpanoratra.
Ny andro niverenako tany an-trano, mpianatra 12 taona no lasa lasibatra farany tamin'ny tifitifitra. Tsy nahazaka ny ratra nahazo azy izy, ka namoy ny ainy raha “nitifitra azy teo akaikin'ny tranony ny polisy”.
Nisy ny tsy fahazoana mivezivezy [amin'ny alina] ao an-toerana. Tsy ny fanjakana ihany no nametraka ny tsy fahazoana mivezivezy [amin'ny alina] fa te hahazo antoka ihany koa ny vahoaka fa napetraka ao an-toerana ny “tsy fahazoana mivezivezy [amin'ny alina] napetraky ny sivily”. Nametraka sakan-dalana ny olom-pirenena mba hanakanana ny polisy tsy hiditra ao amin'ny toeran'izy ireo. Nilaza ny tarehimarika ofisialy fa 446 ireo voasambotra, saingy nilaza kosa ny gazety ao an-toerana fa mbola ambony noho izany ny isan'ireo voasambotra.
Mikatona tanteraka ny tsena taorian'ny famonoana ilay tovolahy. Sary avy amin'ny rain'ny mpanoratra.
Nihiboka tao amin'ny toeran'izy ireo manokana ny mpanao fihetsiketsehana sy ny hafa noho ny fihenjanan'ny tsy fahazoana mivezivezy [amin'ny alina].
Tafaverina tao an-trano, miezaka manery ny kibony ny raiko rehefa nanondro izany aho. Mihazona ny fofonainy mafy kokoa izy, saingy tsy afaka manafina.
Raha nandeha aho, niova ny zava-drehetra. Isaky ny miresaka aminy amin'ny telefonina an-tariby aho, manontany fanontaniana iray hatrany: «Inona no nataonao androany?» Ary mitovy hatrany ihany koa ny valinteniny: “. Mihinan-kanina, matory ary mamerina”
Nahazo lanja ny ray aman-dreniko roa tonta. Na dia tsy mety manaiky izany aza ny reniko, ny zava-misy dia matavy izy.
Ireo antitra ao amin'ny faritra, mipetraka eo amin'ny lavarangan'ny magazay. Sary avy amin'ny rain'ny mpanoratra.
Soa fa tsy mitsabo tena ny raiko, ary tsy mbola nanao izany. Manana fiainana ara-pahasalamana izy. Amin'ny taonany, nanjary miha-tia teknolojia kokoa izy. Ao amin'ny fakan-tsarin'ny findainy, nandrakitra ireo zavatra hitany nandritra ny 100 andro mahery izy, kanefa voafetra ao amin'ny lalan-kely manodidina ny mohalla anay ny fivezivezeny (fandehanany)..
Dada maka ny sariny amin'ny fitaratra tamin'ny faha-80 taonany tao an-trano.
Manomboka ao an-tranonay, afaka mandeha 400 metatra mankany avaratra izy: Fateh Kadal; 300 metatra atsimo mankany Kani Kadal ‘170 metatra andrefana mankany amin'ny tetezana Syed Mansoor Sahab; 120 metatra atsinanana mankany amin'ny toerana hipetrapetrahan'ireo mpiara-belona sy handanian'izy ireo ny andron'izy ireo.
Sarintany ifarimbonana avy amin'ny zanabolana mampiseho ny faritra ahafahany mivezivezy. Sary nafangaron'i Ieshan Wani
Araka ny hita amin'ny Google Maps, voafetra ho 990 metatra, iray kilaometatra latsaka 10 metatra ny toerana ahafahan'ny raiko miivezivezy.
Ny lohahevitra resahana indrindra ao amin'ny lavarangan'ny magazay – na “pyend” araka ny iantsoanay azy ao Kashmir dia ny fitroarana, fampahoriana, ny cricket ary ny fandrobàna 7 roupies lakh (10 000 dolara) vidina firavaka volamena an'ny vehivavy saika ampakarina tao an-toerana, tao Kashmir.
Ankizy mipetraka ao ivelan'ny tranon'izy ireo ao amin'ny faritra. Sary avy amin'ny rain'ny mpanoratra.
“Nilatsaka tampoka tany ho any ny entona mandatsa-dranomasina ary nipoaka teo akaikin'ny namako, nihazakazaka izahay avy eo, navela antenantenany ny resaka”, hoy ny raiko. Manohy mandrakitra sy mampiseho ny fonja mahafinaritra onenany izy.
Ombivavin'ny lehilahy mpivarotra ronono ao an-toerana miampita ny sakan-dalana ao amin'ny faritra. Sary: Dada.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/30/92517/
 Srinagar : https://en.wikipedia.org/wiki/Srinagar
 namoizan'i Burhan Muzaffar Wani ny ainy : https://globalvoices.org/2016/07/11/dozens-killed-after-indian-forces-crackdown-on-protests-in-kashmir/